Iibhodi ezingama-20 zeDrop-Dead-Gorgeous Charcuterie Ideas - Ukutya
Ukuhombisa Celeb Jonga Ukomelela Kwenziwa Kanjani Iincwadi Ukuhla Ukusinda Ekhaya Impilo Imikhwa Ulusu
Iibhodi ezingama-20 zeDrop-Dead-Gorgeous Charcuterie Ideas
Ibhodi ye-charcuterie board kukuya kubabuki zindwendwe-kunye nomthandi weendwendwe ozithandayo-ngesizathu esivakalayo. Ngelixa 'i-charcuterie' ngokwe-teknoloji ithetha ukuba uluhlu lwezinto eziphilileyo ezahlukeneyo, ezi ziqwenga ziya ngaphaya kwe-salami kunye neprosciutto, enezinto ezahlukeneyo itshizi , abaqhekezi , isasazeka kwaye ivelise. Kodwa yintoni kanye kanye ebenza bathandwe kangaka? Kubaqalayo, ziguquguquka kakhulu: unokuhlengahlengisa izithako kwizinto ozikhethayo ezahlukeneyo, ulinganise izahlulo phezulu okanye ezantsi ngokusekwe kwinani leendwendwe, uzenze zifikeleleke (okanye isiphelo esiphezulu) ngendlela othanda ngayo kwaye ungabopha kumxholo othile, njengombala okanye ixesha lonyaka. Kodwa mhlawumbi esona sizathu siphambili kukuba bafuna izakhono zokupheka ukuze bangahlanganisi. Ngokuqinisekileyo, kukho ubugcisa bokwenza ibhodi ye-charcuterie ibonakale inomdla njengaleyo uyibonileyo kwi-Instagram nakwiPinterest. Sukuba nexhala- silapha ukuze sikunike izimvo zebhodi ye-charcuterie efanelekileyo ngokufanelekileyo kwindibano yakho elandelayo okanye itheko leholide .
ZIQHELEKILEYO: I-55 yeKrismesi yokutya okutyayo nkqu naBantu abaXakekileyo banako ukuphuma
Ifoto ngu-EasyPx / Getty Izithombe
Uyenza njani iBhodi yeCrcuterie
Yikholwe okanye ungakholelwa, awudingi ukuba ube nomtsalane kubugcisa ukwenza ibhodi yeetshathi engalibalekiyo (nangona ngokuqinisekileyo ingonzakalisi). Ngokwenyani yinkqubo entle yefomula elula njengokuqhekeza ibhodi yakho inyukele kwiindidi, emva koko ukhethe izithako kudidi ngalunye ezihambelana. Njengokuba, iibhodi zokutsala Kuya kufuneka ube nenyama ethambileyo, ekulula ukuyibamba kuyo esele isikiwe (njengeprosciutto okanye ijamón Ibérico), ukongeza kwinyama enzima efuna ukusikwa (njenge-log ye-salami okanye i-soppressata). Kuba ezona nyama zinzima zifuna ukusikwa, zihlala zibekwa ecaleni kweentshizi ezinzima, njengebhlokhi ye-cheddar ebukhali okanye iManchego. Iibhodi ezininzi zikwabandakanya iitshizi ezithambileyo, ezisasazekayo, ezinje nge-chevre, kodwa ungatshintsha nakuphi na ukusasazeka okanye dipha ukufumana isisityebi esifanayo, ukusebenza kakuhle, njenge-tzatziki okanye i-hummus.
Nje ukuba ube nezona nyama zakho ziphambili, zamasi kunye nokusasazeka okanye ukudibanisa, lixesha lokuba uhombise ngazo zonke iindlela zokubonisa. Sithetha abaqhekezi Ijam, isonka, i-pickles, iziqhamo, i-honeycomb kunye nantoni na oyithandayo. Ngokwenkcazo-ntetho, uyakufuna indawo ethe tyaba ukuze usebenze yonke into, intle ibhloko eyenziwe ngomthi okanye a ibhodi yokusika emarmore . Iimpawu ezincinci zecandelo ngalinye zihle kwaye ziluncedo, ngelixa izitya ezincinci kunye neepleyiti ezisetyenziselwa ukugcina okanye iziqhamo zinokongeza umbala kunye nobukhulu ekusasazeni.
Iingcamango ezingama-20 zeBhodi yeCharcuterie
Ifoto: Liz Andrew / Isitayile: U-Erin McDowell
1. I-Prosciutto kunye neBhodi yeSaladi yeFig
Icandelo elinzima malunga nokukhonza isaladi kwisitya? Zonke iintloko (funda: elona candelo lilungileyo) ziwela ezantsi. Sebenzisa ukusika okumnandi okanye ibhodi yetshathi ukusombulula le ngxaki.
2. IBhodi kaMongameli yeShizi
Phatha iindwendwe zakho njengeeVIP. Onke amacandelo ebhodi aphefumlelwe kukutya okuthandwa ngumongameli okudlulileyo.
3. I-Cranberry Rosemary Cheese Roll kunye neBhodi yeCrcuterie
Ewe, sizimisele. Iicashews ezimanzi kunye ne-miso elula zenza le gem ingenamveliso yobisi.
4. IBhodi yeTshizi elula ephefumlelweyo yeSpanish
Isonka samasi iManchego, i-chorizo ​​yokutshaya kunye neham yaseIberia? Oku kufuna ipati.
5. IBhodi yeCharcuterie Iindlela ezimbini
Ibhodi yokuqala yeyabantu abathanda inyama kunye namasi. Okwesibini kubeka i-hummus, i-tapenade, amandongomane kunye ne-crudités ngaphambili kunye neziko labahlobo bakho be-vegan.
Intoni's Ukupheka kukaGaby
6. IBhodi yeZimuncumuncu zasehlotyeni
Singaba noku kwesidlo sethu sokugqibela, uGaby Dalkin. Sibambe siphunga kwipatio kunye neglasi ye-vino ngesandla.
7. IBhodi yeeTshizi yeAntipasto Appetizer
Esi siqalo sinento encinci kuwo wonke umntu. Elona candelo silithandayo yiparele i-mozzarella egalelwe ioyile yomnquma, imifuno kunye neziqholo.
Utya kamnandi kangakanani
8. I-Maple Cream kunye ne-Apple Baked Brie Board
Le bar yecrostini, nangona. Olu buhle bexesha lonyaka baneyure yokubonga yokubhala ebhalwe kuyo yonke indawo.
Udlala Kakuhle Ngebhotolo
9. IBhodi yeTshizi ye-Ultimate Burrata
Libala iindwendwe. Siyabheja singayenza yonke le nto sisodwa.
Iincopho zokunxiba ngejeggings
10. Isitya senyama kunye noshizi
I-BRB, sifaka ubuso bethu. Siyakuthanda ukongezwa kwee-pecans ezimnandi ze-caramelized.
11. Itshizi kunye neBhodi yeCrcuterie
Ewe, siza kuba nayo oku kwisidlo sangokuhlwa. Kwaye sihamba umgama owongezelelweyo ngokusebenzisa ekhaya isonka esimuncu endaweni yokuthengwa kwevenkile.
12. Ibhodi yetshizi yasebusika
Phakathi kwee-persimmons, iirharnate arils kunye ne-kumquats, yenzelwe eyakho Krisimesi itheyibhile.
Spoon ifolokhwe Bacon
13. Isonka esisicaba seCharcuterie
Ukuba ukhonza kuphela abantu abambalwa, akukho sidingo sokuyila ibhodi enkulu yetshathi. Zama ezi prosciutto-burrata flatbreads endaweni yoko.
Ikhitshi elicocekileyo likaLexi
14. IBhodi yeCharcuterie eneBacon Onion Jam
Sithembe, kulula kunokuba ibonakala. Umzekelo, i-bacon-anyanisi jam yenziwa phantse ngokupheleleyo kwiziseko zokutya.
15. I-Butternut Squash Cheeseball kunye neBhodi yeChizi
Wena kuphela * ucinga * iitshizi ziphelelwe lixesha. Olu lwanamhlanje luthatha i-cream cream nge-Parmesan, butternut squash, ibhotolo emdaka kunye namayeza.
16. IBhodi yeCcutcuterie-efanelekileyo yeDinner
Unentliziyo eyaneleyo yokudlala indima yekhosi ephambili. Elona candelo lethu silithandayo yi-basil-artichoke tapenade, izandla phantsi.
17. Ibhodi yeCheese elula
Oku kukhetha amanqaku itshizi ezantsi kumanqatha, zilungele iinyanga ezishushu. (PS, siyakuthanda, cantaloupe eqhotyoshelwe kwiprosciutto.)
18. IBhodi yeeFondue zeeshizi
Eyona nto ingcono kunebhodi yesonka esisikiweyo? Imbiza yetshizi encibilikiweyo, ewe. Khetha phakathi kwewayini emhlophe-iSwitzerland kunye nebhiya-cheddar fondues (okanye heck, yenza zombini).
Ubomi Benziwe Bumnandi
19. Ibhodi yebrunch
Urhwebo ngesiqhelo abarhanelwa njenge-capicola kunye nesalami ye-crisp bacon kunye ne-salmon yokutshaya. Emva koko, banxibe nge-waffles, iziqhamo ezitsha, i-yoghurt yamaGrike, i-pancake okanye imingxunya yekhaya eyenziwe ngeminikelo.
20. IBhodi yeChocolate yeCharcuterie
Hayi, ayizizo zonke iibhodi ezifuna itshizi! Bukela le vidiyo ukuze ubone ukuba yenziwa njani.
Ingxelo eyongezelelweyo iAlexandra Hough
ZIQHELEKILEYO: Ungayiphosa njani ipleyiti entle yetshizi engaphantsi kwe- $ 25
unyaka weziqhamocut #Izilwanyana zasekhaya #Wee #bhodi #idelicatessen #lungelovi #bhodi yebhodi #easyrecipes #YesItShirt #YesItShirt #lungelo
Isandi sentsusa - ANavaroli13
Izigaba Ulusu Ukutya Diy
ukuthintela iinwele kuwa amayeza
Izibonelelo zejusi yommoba kunye neziphumo ebezingalindelekanga
Eyona miboniso bhanyabhanya yothando yehollywood
izihlangu zokunxiba ngejean
Umfazi onomdla kakhulu kumtshato
Ungazenza njani izilungiso zekhaya ezixineneyo
izisombululo zokuwa kweenwele ekhaya